Qalabka horumarinta ee CadCorp - Geofumadas
Febraayo, 2008 ArcGIS-ESRI, Cadcorp
Post post hore ayaan ka wada hadalnay qalabka mashiinka ee CadCorp, qaab la mid ah ee ESRI. Xaaladdan waxaan ka wada hadli doonaa kordhinta ama xalal dheeraad ah ee horumarinta ama ballaarinta awoodda.
Inkasta oo macnaheedu yahay, isbarbardhigga qalabkani ma aha mid sahlan in lagu qeexo sinaanta ArcGIS Engine iyo ArcIMS maxaa yeelay ganacsiga CadCorp waa mid aad u soo jiidasho leh.
1. Tools ActiveX Development Runtime
Xakamaynta Xakamaynta (CDM)
qalab horumarinta aasaasiga ah Cadcorp iman in waxa la yiraahdo imódulos gacanta (CDM), iyadoo faa'iido ah in la keeno labada interfaces user kaalmo (saaxiriinta) iyo interfaces user user dareen map macquulka ah. Sidaas awgeed, kobcinta horumarinta moodelka, tusaale ahaan, waxay leedahay shabakad isku mid ah MapModeller oo keliya ujeedooyinka barnaamijka. Qalabkani waa mid la mid ah (aan ahayn mid la mid ah) ArcGIS Engine iyo ArcSDE ee qoyska ESRI.
Qalabka MapViewer wuxuu leeyahay qayb ka mid ah CDM Viewer
Qalabka MapManager wuxuu leeyahay qayb ka mid ah maamulaha CDM
Qalabka MapModeller wuxuu leeyahay qayb ka mid ah CDM Modeller
Waxaa lagu horumarin karaa iyadoo la adeegsanayo tiknoolijiyada ActiveX iyo luuqadaha sida Visual Basic, Delphi, C ++ iyo PowerBuilder.
CDM-yadaani waxay leeyihiin muuqaal xiiso leh waxayna noqon karaan laysanyo waqti ah (waqti la aadayo), si aad u iibsan karto liisan hal sano ah, tusaale ahaan, u oggolaanaysa soo-saare inuu iibsado sheyga kaliya muddada mashruuca uu horumarinta Tani waxay si weyn hoos u dhigeysaa kharashyada, in kasta oo fikradda ah "shatiga by programmer" uu yahay wax iska caadi ah, kumana ahan kombiyuutarka PC.
Tani waxay sidoo kale hoos u dhigeysaa kharashyada codsiyada loogu talagalay iibinta, sababtoo ah dadka isticmaala waxay kaliya u baahan yihiin inay bixiyaan kharashka rukhsadda runtime (badiyaa qiime u dhow 40% qaybta asalka ah).
2. Qalabaynta horumarinta webka
Tani waa farsamoyin u oggolaanaya sameynta codsiyada in ay ku shaqeeyaan adeegyada webka (adeegga Webka), iyo sidoo kale inay abuuraan xog ka hoosaysa heerarka fiidiyowga ee Intranet ama internetka.
MapBrowser waa wax soo saarka free ah maaraynta adeegyada macluumaadka juqraafiyeed hoos heerarka OpenGIS, mid ka mid ah faa'iidooyinka in Cadcorp taageeri doonan Nice ah. Jidka codsiyada Tani waxay la soo saari karaa Server Web Map labadaba (WMS) maps daabacaadda u janjeedha, Server Web Feature (WFS) kala iibsiga u janjeedha ee geometries in GML qaabab / XML iyo Web Caymiska Server (musqulaha); dhamaantoodna faa'iido u leh inay noqdaan heer caadi ah isticmaalka furan.
Tani waa xalka ugu sarreeya, marka la barbar dhigo maskaxda xiran ee ESRI iyada oo la adeegsanayo alaabta IMS / GIS Server.
ASC hore jirtay, ama qayb server firfircoon, xal this loo tagay iyo Cadcorp bixisaa GeognoSIS.NET in kordhiyay shaqeynayaan oo ka mid ah qaybaha kale ee horumarinta si ay u fuliyaan codsiyada on Intranet ama isticmaalka Internet. Isticmaalka deegaanka horumarinta .NET ama luqadaha kale ee HTTP iyo SOAP ku salaysan sida Java taas oo lagu fulin karo dhowr server. Qalabkani wuxuu la mid yahay ArcIMyada qoyska ESRI.
Waxaa jira qalab turjumaad ah oo loogu talagalay adeegyada la abuuray ASC-da hore ee loo marayo GeognoSIS.
3. Qalabka Horumarinta Ganacsiga (EDK)
Tani waa xirmo ka mid ah waxyaabaha soo saaraha sameeya ee soo socda laba nooc:
Qalabka Horumarinta Barnaamijka (SDK), ee loogu talagalay abuurista codsiyada tiknoolajiyada ee ActiveX
Qalabka Horumarinta Internetka (EDK), kaas oo fududeynaya horumarinta xogta meelaynta si loo faafiyo adeega webka (adeegyada webka) Qalabkani waa mid la mid ah (maaha sidaas oo kale) ee ArcGIS Server ee qoyska ESRI.
Post Previous«Previous Qoyska CadCorp ee alaabada
Post Next Jawaabaha ma bixin karoNext »